Garowe:Shir qabyo ah ee Madaxda dowlad goboleedyada iyo ciidan wadada xirtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 20 October 2018 20 October 2018
Madaxda maamul Goboleedyada ka jira dalka qaarkood ayaa lagu wadaa inuu manta shir uga furmo magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland
Shirkan oo marar badan dib u dhacay ayaa lagu wadaa inuu galabta ka furmo magaalada Garowe, isagoo uu socon doono 20-23-ka bishan Oktoobar.
Waxaa ka qeyb galaya afar madaxweyne oo kala ah Madaxweynayaasha maamullada Puntland, Jubbaland, K/Galbeed iyo Galmudug.
Axmed Madoobe ayaa ah madaxweynihii ugu horeeyay ee gaara magaalada Garowe, waxaana wararku sheegayaan in Golaha Iskaashiga dowlad Goboleedyada laga saaray maamulka Hirshabelle, kadib markii uu madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare uu la heshiiyay dowladda Soomaaliya.
Boorka shirka Garowe ee Golaha maamul Goboleedyada ayaa waxaa ka muuqda afarta madaxweyne ee Puntland, Galmudug, K/Galbeed iyo Jubbaland, waxaana la filayaa in madaxda dowlad goboleedyadu shirkooda ka soo saaraan go’aano kuwii hore ka adadag oo ay ka qaadanayaan dowlada dhexe oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo.ciidamada Gadooday halkaan Riix
Ciidamo gadoodsan oo saaka xiray qaar ka mid ah Wadooyinka Magaalada Garoowe